Забур 145 CARS - Nnwom 145 AKCB
Ayeyi dwom. Dawid de.
1Mɛma wo so, me Nyankopɔn, Ɔhenkɛse;
mɛkamfo wo din daa daa.
2Da biara, mɛkamfo wo;
na mama wo din so daa daa.
3Awurade so, na ɔsɛ nkamfo kɛse;
obiara ntumi nsusuw ne kɛseyɛ.
4Awo ntoatoaso baako bɛkamfo wo nnwuma akyerɛ afoforo;
wɔbɛka wo nnwuma akɛse ho asɛm.
5Wɔbɛka wʼanuonyam ne wo tumi a ɛheran no ho asɛm,
na mɛdwene wʼanwonwadwuma ho.
6Wɔbɛka wo nnwuma a ɛyɛ hu no mu tumi ho asɛm;
na mapae mu aka wo nneyɛe akɛse no akyerɛ.
7Wɔbɛhyɛ wo papayɛ mmoroso no ho fa,
na wɔde anigye ato wo trenee ho dwom.
8Awurade yɛ ɔdomfo ne mmɔborɔhunufo;
ne bo kyɛ fuw na nʼadɔe dɔɔso.
9Awurade ye ma obiara;
na ɔwɔ ahummɔbɔ ma nʼabɔde nyinaa.
10Awurade, wʼabɔde nyinaa bɛkamfo wo;
na wʼahotefo bɛma wo so.
11Wɔbɛka wʼahenni no anuonyam ho asɛm
na wɔaka wo mmaninyɛ ho asɛm,
12sɛ ɛbɛyɛ a nnipa behu wo nnwuma akɛse
ne wʼahenni anuonyam a ɛheran no.
13Wʼahenni yɛ daa ahenni,
na wo tumidi wɔ hɔ ma awo ntoantoaso nyinaa.
Awurade di ne bɔhyɛ nyinaa so,
na ɔwɔ ɔdɔ ma biribiara a wayɛ.
14Awurade wowaw wɔn a wɔhwe ase
na ɔpagyaw wɔn a wɔn nnesoa ama wɔakom.
15Aniwa nyinaa hwɛ wo kwan,
na woma wɔn, wɔn aduan wɔ ne bere mu.
16Wubue wo nsam,
na woma biribiara a ɛwɔ nkwa no nʼapɛde.
17Awurade teɛ wɔ nʼakwan nyinaa mu;
na ɔyɛ adɔe ma nea wayɛ nyinaa.
18Awurade bɛn wɔn a wɔfrɛ no nyinaa,
wɔn a wɔfrɛ no nokware mu nyinaa.
19Ɔyɛ wɔn a wosuro no no apɛde ma wɔn;
otie wɔn sufrɛ na ogye wɔn.
20Awurade hwɛ wɔn a wɔdɔ no no nyinaa so,
nanso amumɔyɛfo de, ɔbɛsɛe wɔn nyinaa.
21Mʼano bɛkamfo Awurade.
Ma abɔde nyinaa nkamfo ne din kronkron no
AKCB : Nnwom 145